China Wet Spraying Machine orinasa sy mpamatsy |Lianggong
Famaritana ny famokarana
1. Misy boom miforitra, ny haavon'ny tifitra ambony indrindra dia 17.5m, ny halavan'ny tifitra ambony indrindra dia 15.2m ary ny sakany ambony indrindra dia 30.5m.Ny sehatry ny fanorenana no lehibe indrindra ao Shina.
2. Rafitra herinaratra avo roa heny amin'ny maotera sy maotera, fiara hydraulic tanteraka.Ampiasao ny herin'aratra hiasa, hampihenana ny entona setroka sy ny fahalotoan'ny tabataba, ary hampihena ny vidin'ny fanorenana;Ny herin'ny chassis dia azo ampiasaina amin'ny hetsika maika, ary ny hetsika rehetra dia azo atao amin'ny alàlan'ny switch power chassis.Fampiharana matanjaka, fiasa mety, fikojakojana tsotra ary fiarovana avo.
3. Izy io dia mampiasa fiara hydraulic roa-tetezana feno sy chassis mandeha amin'ny kodiarana efatra, miaraka amin'ny radius mihodina kely, miendrika wedge sy horoscope mandeha, fivezivezena avo sy fanaraha-maso.Ny kabine dia azo ahodina 180° ary azo atao mandroso sy miverina.
4. Miaraka amin'ny rafitra piston pumping mahomby indrindra, ny habetsaky ny tsindrona ambony indrindra dia mety hahatratra 30m3 / h;
5. Ny fatran'ny fametahana haingana dia amboarina ho azy amin'ny fotoana tena izy araka ny fifindran'ny paompy, ary ny habetsaky ny fampifangaroana dia amin'ny ankapobeny 3 ~ 5%, izay mampihena ny fanjifàna ny mpandraharaha haingana ary mampihena ny vidin'ny fanorenana;
6. Afaka mahafeno ny fihadian-tany feno amin'ny lalamby tokana, lalamby roa, lalamby, lalamby haingam-pandeha, sns., ary koa fihadiana dingana roa sy telo.Ny invert koa dia azo zakaina malalaka ary malalaka ny sahan'ny fanorenana;
7. Ny fitaovana fiarovana amin'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny feon'olombelona sy ny fanairana fanairana, ny fiasa mety ary azo antoka kokoa;
8. Low rebound, vovoka kely ary kalitao avo lenta.
Herin'ny compressor an'habakabaka 75kw
Haben'ny setroka 10m³/min
Fanerena setroka miasa 10bar
Paramason'ny rafitra accelerator
Fomba fiara Fiara misy kodiarana efatra
Fanerena ambony indrindra amin'ny accelerator 20bar
Fifindran-toerana ambony indrindra amin'ny accelerator 14.4L/min
Fanamafisana ny habetsahan'ny tanky 1000L
Modely Chassis Chassis injeniera vita-tena
Fitohizan'ny kodiarana 4400mm
Lalana axle aloha 2341 mm
Rear axle track 2341 mm
Hafainganam-pandeha ambony indrindra 20 km/h
radius fihodinana farany ambany 2,4m anatiny, 5,72m ivelany
Fiakarana ambony indrindra 20°
Fanadiovana ambanin'ny tany 400mm
Lavitra frein 5m (20km/ora)
Haavo tifitra -8,5m~+17,3m
Sakan'ny famafazana ± 15,5m
Boom pitch zoro +60°-23°
Ny zoro fitendry forearm +30°-60°
Zoro mihodina boom 290°
Sandry misy fizarana telo ny zoro savily havia sy havanana -180°-60°
Boom teleskopika 2000mm
Sandry teleskopika 2300mm
Axial fihodinan'ny nozzle mpihazona 360°
Nozzle seza axial swing 240°
Nozzle deflection zoro brushing
8° × 360° tsy manam-petra mitohy
teo aloha: Birao tsy tantera-drano sy Trolley Rebar Work
Manaraka: Fanamboarana tsanganana plastika